Niruta Singh returned from Mumbai – Nepali Movies
Niruta Singh returned from Mumbai
Niruta didn’t find job in Mumbai…
नेपाली चलचित्रमा पुराना नायिकाहरु फर्कने क्रम बढेको छ। दुई दशक अघि नेपाली फिल्म उद्योग छाडेकी मनिषा कोईराला मात्र हैन, लामो समय देखि अमेरिका बस्दै आएकी करिश्मा मानन्धर पनि नेपाली सिनेमामा फर्किएकी छन्। हालै मात्र नेपाल आएकी करिश्मा मान्धर अब निरन्तर नेपाली सिनेमामै काम गर्ने योजनामा छिन्।
यस्तै बिगत दुई वर्ष देखि मुम्बईमा बस्दै आएकी अर्की नायिका निरुता सिंह पनि पुन नेपाली सिनेमामा फर्किएकी छन्। छायाँकार राजु बिक्रम थापाको बिशेष सहयोगले नयाँ फिल्म ‘द गेम’मा मुख्य अभिनेत्रीको भूमिका निरुताले पाईन सोही चलचित्रमा अभिनय गर्न उनी हालै मात्र नेपाल फर्किएकी हुन्।
तीन वर्ष अघि बनेको तुलसी घिमिरेको फिल्म देशमा अभिनय गरेपछि निरुताले लामो समयसम्म चलचित्र बिहिन भएर बस्नु पर्यो। त्यसपछिका दिनमा केही विज्ञापनमा काम गरेपनि आफुले चाहेको जस्तो फिल्म उनी पाईनन्। सोही कारण उनी दुई वर्ष अघि मुम्बई पसेकी हुन्।
मुम्बई जानु अघि आफुले अब ‘इन्टेरियर डिजाईन’ कोर्ष पुरा गर्ने जानकारी सञ्चारकर्मी र साथीसँगीलाई उनले गराएकी थिईन्। त्यतिमात्र हैन। मुम्बई जाने जो कोहीलाई पनि उनले त्यहाँ आफु ‘इन्टेरियर डिजाईन’को अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएकी थिईन्। तर पछिल्लो समय आफ्नो फिल्मको कामले मुम्बई पुगेका एक नेपाली चलचित्रकर्मीसँगको भेटमा नायिका निरुता सिंहले आफुले इन्टेरियर डिजाईन पढ्न नपाएको खुलासा गरिन्। लामो समय देखि मुम्बईमा चलचित्र तथा टेली चलचित्रमा काम पाउनका लागि साघर्ष गरिरहेकी निरुताले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि काम नपाएको पनि ती चलचित्रकर्मीले बताए। त्यसो त एक साता अघि फिल्म ‘द गेम’को मुहुर्तको क्रममा भेटिएका निरुताले मुम्बईमा आफु इन्टेरियर डिजाईन सिकिरहेको केही सञ्चारकर्मीलाई बताउँदै थिईन्।
त्यहाँ कलेजमा ईन्टेरियर डिजाईन पढ्नको लागि स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। आफुले डिप्लोमा सम्म अध्ययन गरेको बताउँदै आएपनि निरुताले स्नातक भने पुरा गरेकी छैनन्। सोही कारण पनि उनले मुम्बईमा ईन्टेरियर डिजाईन पढ्न नपाएको ती सिनेकर्मीले खुलासा गरेका छन्। आफुले मुम्बईमा इन्टेरियर डिजाईन पढीरहेको निरुताले बताएपनि उनले त्यहाँ त्यस्तो कुनै पनि अध्ययन नगरेको खुलासा भएको छ। त्यसो भए त्यहाँ उनी के गर्दै छिन त? उनी विशुद्ध बेरोजगार भएर वसेको पनि खुलासा भएको छ। ‘मुम्बई जस्तो ठाउँमा बेरोजगार बस्दा कसरी गुजारा चल्छ त? धेरैको जिज्ञासा यस्तो हुन सक्छ। तर निरुतालाई एक जना युवा उधोगकर्मीले मुम्बई बस्न प्रसस्त आर्थिक सहयोग गरिरहेको मैले पाएँ।’ ती चलचित्रकर्मीले भने। उच्च घरानाका ती युवा उद्योगपतिले निरुतालाई बेला बेलामा यहाँबाट पैसा पढाई रहने गरेको पनि ती चलचित्रकर्मीले दाबी गरे। तर ती युवा उद्योगपतिको नाम भने उनले बताउन चाहेनन्।
निरुताको लक्ष्य बलिउड सिनेमामा काम गर्नु थियो। त्यसका लागि उनले मुम्बई मेहनत नगरेकी हैनन्। काम पाउनको लागि उनले ‘पर्सनल एजेन्ट’ पनि नियुक्त गरिन्। मुम्बईमा सिनेमामा काम पाउन कलाकारको पर्सनल एजेन्ट अनिवार्य हुनै पर्छ। पर्सनल एजेन्ट राखेर पनि निरुताले अहिलेसम्म बलिउड फिल्ममा काम पाउन सकिनन्।
फिल्ममा काम नपाएपछि नायिका निरुता सिंहले बलिउडका टेली चलचित्रमा काम गर्ने सोच बनाईन्। जसका लागि उनी विभिन्न टेली फिल्म निर्माण कम्पनीमा पुगिन्। टेली फिल्ममा समेत मुख्य रोल त के उनले सह नायिकाको रोल समेत पाईनन्। केही टेली फिल्ममा उनले काम पाउने आशा गरेकी थिईन्। तर निरुताको हिन्दी लबज निकै कमजोर रहेको भन्दै निर्देशकहरुले उनलाई टेली फिल्ममा समेत रोल दिएनन्। यसरी बलिउडको फिल्म त टाढाको कुरा टेली चलचित्रमा समेत काम नपाएपछि उनी नेपाल फर्कने सुरुमा थिईन्। यसै क्रममा बलनरसिंह राणाले आफ्नी श्रीमती तथा चलचित्र सम्पादक रक्षा सिंह राणाको निर्देशनमा नयाँ फिल्म ‘द गेम’को घोषणा गरे। जसमा बालनरसिंह आफैंले नायकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यही चलचित्रमा निरुतालाई नायिकामा लिने निर्णय यी दम्पत्तिले गरे। त्यसपछि मुम्बईबाट निरुता सिंह काठमाडौं आएकी हुन्। अहिले उनी सोही चलचित्रको छायाँकनमा व्यस्त छिन्।
नेपाली सिनेमामा २०४९ सालमा चलचित्र दक्षिणा मार्फत प्रबेश गरेकी निरुता सिंह अहिले फेरी नेपाली चलचित्रमा फर्किएकी छिन्। अब उनी नेपाली फिल्ममा काम पाउनका लागि यतै बस्छिन या फेरी मुम्बई फर्किन्छिन्। त्यो भने अहिले नै निर्क्योल गर्न गाह्रो छ। निरुतालाई एक जना युवा उधोगकर्मीले मुम्बई बस्न प्रसस्त आर्थिक सहयोग गरिरहेको मैले पाएँ।’ ―कालिका महत
Posted by maha at 8:55 pm	Tagged with: Niruta Singh
One Response to “Niruta Singh returned from Mumbai”
Niruta u are best actress all times..love u
Richa Ghimire – Nepali Actress Breaking up to act in movies – Nepali artists’s personal lives